Imvelaphi kaTâ € ™ ™ Chi "Balm for umphefumulo nomzimba
Ukuzivocavoca umzimba nomqondo
Abantu abaningi emhlabeni jikelele baye bathola ubuciko bokudala bokuTh Chi futhi bawusebenzisela ukuvumelanisa izingqondo zabo, ukulawula ukugula ngokomzimba, njengokwenkolo yendabuko noma ukuzindla.
Ubuciko beTai Chi - sifusergej / Pixabay
Njengemikhuba eminingi yaseMpumalanga Ekude, lokhu kubonakala njengenzuzo ezuzisayo ngisho nokunye emithi yokwelapha. Kodwa yini ngempela uT'ai Chi, ivelaphi, yenzeni futhi yenzani?
Ukuqala kukaT'ai Chi cishe ku-18 ephumayo. Century. "Bengenwa" Ngaleso sikhathi, umndeni ngamunye ebalulekile China siqu art yabo bokulwa ukuthi eminye ezifundiswa ukubulawa methodological futhi lobuchwepheshe ezizukulwaneni ngezizukulwane, ngaphandle kodwa sengathi imfihlo owayemqaphile.
I-T'ai Chi manje ayitholakali njengendlela yokuqala yokuqeqeshwa kwe-swordplay, kodwa manje ukukhathazeka kwayo okuyinhloko ukukhuthazwa nokulondolozwa kwezempilo.
Ukunyakaza okuphelele kubizwa ngokuthi ifomu. Lapha, lo muntu uthatha imizimba eminingana ehlukile ngemva kokunye futhi ewaxhuma ngokunyakaza okugelezayo.
Izikhundla ezimele - njengeyegaga - amagama akhethekile, futhi ifomu lingaba ngokushesha ngezikhundla ze-140. Kuthatha isikhashana ukufaka yonke inqubo, kepha lokho kuyisici esibalulekile salolu mdlalo.
Indlela iyinhloso, futhi ngokubekezela nokukhuthazela okunye kufeza lokho. Umlingo wangempela kaT'ai Chi uhamba ngokuhamba kancane nokugxila kokuhamba. Izitayela ze-Warrior zisasetshenziswa ngokusheshisa kakhulu, kodwa kuyi-classic version, amanga amanga ngokoqobo ekuthuleni.
Ukuqaliswa kwefomu kuqala ngokuma okulungile. Okulungile, ngamadolo aguqulwe kancane, amehlo aqonde ngqo kanye nezingalo ezivulekile, omunye ubuthana emoyeni futhi uyavuma ukugxila ekugxileni emaminithini ambalwa alandelayo ngokubona komzimba.
T'ai Chi - Lenin landscape / Pixabay
Ukuphefumula kugeleza ngokulinganayo nangokuthula ngomzimba wonke. Kunconywa ukukhetha ingxenye enokuthula yosuku nendawo engaphazanyiswayo ukuze wenze izivivinyo.
Kungakhathaliseki ukuthi kusihlwa epakini, ekamelweni lokuphumula noma ekuseni ekuseni emgodini - into esemqoka, iziphazamiso ezingathandeki nezici eziphazamisayo zide kakhulu.
Yiqiniso ungakwazi eyodwa noma ngaphezulu izinhlobo self-wafundisa ukufundisa amabhuku, ukuqeqeshwa nge umfundisi ongumakad 'ebona kusiza asuka Wabasaqalayo ukubeka ithemba entweni engaqinisekile. Ngaphezu kwalokho, noma yikuphi ukuma okubi akukugayi nakancane; ufunda ngokushesha, ukuthi uzizwa kanjani "okulungile".
Ukusetshenziswa okujwayelekile kwama-T'ai Chi umzimba kunemiphumela emibili yokuvimbela nokuphulukisa kuwo wonke umzimba. Ngokuvamile, emva kwesikhathi esithile sokuzivocavoca okuqhubekayo, ubuchopho, ikhono lokuvuselela, ukulinganisela kokulinganisela nokugaya kungcono.
Amandla ahlakaza, ukujikeleza nokulala kwesigqi ukuzinza futhi nokuthula kwangaphakathi okusheshayo kufaka ngokushesha. Ikakhulukazi, izinkinga ngokubambisana kanye ekuphazamisekeni okuhlobene nokucindezeleka lomzimba i-chemistry T'ai Chi Lingaba okukhulu ukuphulukiswa imiphumela uma isetshenziswa ngaphansi isiqondiso esifanele.
Ngenhlanhla, lolu hlobo lokunyakaza alukwazi ukulinganiselwa kweminyaka yobudala, futhi kungaba yinto efiselekayo, ngisho noma ezweni laseNtshonalanga ngokungahloniphi emisebenzini yomphakathi ngokwemvelo kwakungukuphila kwansuku zonke. Abantu abaningi baseShayina abakwazi ukungahambi kahle.
Sauna - ukuphumula komzimba nengqondo
Ikhasi le-Color coloring ngezandla zomzimba
Abantu abadala bekhasi lemibala - Imizimba yokuhlanganisa